NIVOAKA TAMIN’NY FAHANGINANY ELYSEE RATSIRAKA : “Mapar aho, ary tsy miala amin’ny Mapar”
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny Ben’ny tanànan’i Toamasina, Elysée Ratsiraka, lany tamin’ny anarana vondrona Miara-dia amin’ny Prezidà Andry Rajoelina, manoloana ny resabe momba azy eo amin’ny tontolo politika. 1er février 2017
Nandeha mantsy ny resaka nandritra ny andro maromaro fa hoe : “efa namadika palitao ho lasa HVM ity Ben’ny tanàna Mapar ity. Nanampy io resabe io ny tsy fahatongavany niatrika ny lanonambe fifampiarahabana tratry ny taona izay notantaterahin’ny TGV sy ny ireo mpiara-dia amin’ny Filoha Andry Nirina Rajoelina izay natao teto Toamasina, tao amin’ny tokotany malalaka Stella-Maris, ny sabotsy 28 janoary teo iny. Nambarany fa noho ny raharaham-pianakaviana, izany hoe : nisy mariazy ara-pombandrazana novonjeny ivelan’ny tanànan’i Toamasina, tany Tsangambato, any Mahanoro no tsy nahafahany nihetsika, noho izy ray amandreny tompon-draharaha na “zaman-jaza”.
Nofaritany mazava tsara fa efa niera ary niteny tamin’ny tompon’andraikitra ambony teo anivon’ny Mapar aty amin’ny foibe, ny tenany tamin’izao tsy fahatongavany niatrika ity lanonan’ny TGV ny sabotsy teo iny. Momba ny filazana fa nisintaka Mapar indray dia namaly ity Ben’ny tanàna Elysée Ratsiraka fa : “lainga avokoa izany rehetra izany. “Tsy mbola manana eritreritra ny hiala amin’ny Mapar ny tenako. Mapar aho ary tsy miala amin’ny Mapar”, hoy izy. Namarana ny teniny ny Ben’ny tanana Elysée Ratsiraka ny amin’ny hoe : “tsy marina ny filazana fa namadika palitao, fa Mapar aho ary mijanona ho mpanara-dia ny Filoha Andry Nirina Rajoelina”.